Ogoow Sirta ka dambeysa in Zidane uu dib ugu soo laabto Real Madrid – Gool FM
Byare March 11, 2019
(Madrid) 11 Maarso 2018. Zidane ayaa dib ugu soo laabtay Real Madrid isagoona la gaaray heshiis gaaraya ilaa 2022 kaddib markii la ceyriyay Solari.
284 maalmood oo qura ayaa laga joogaa markii uu Zidane iskiis uga tagay Bernabeu, haddaba maxaa iminka keenay inuu dib ugu soo laabto Madrid.
Sirta ka dambeysa in macalinka reer France uu dib ugu soo laabto Los Blancos ayaa ah in farta laga saaray awooda buuxda uu wuxuu doono ku sameyn karo.
Zidane oo saddex Champions League oo xiriir ah la qaaday Madrid ayaa ka tagay kooxda oo iska casilay xilka kaddib markii uu Florentino Perez ku gacan seyray dalabkiisa ahaa in kooxda lagu sameeyo dib u dhis xoogan isla markaana la keeno xiddigo waa wayn.
Madaxwaynaha Real Madrid ayaa iminka aqbalay dalabka Zidane iyadoona jeebka loogu shubi doono lacago xoogan oo uu ku soo xero galiyo xiddigo heer sare ah, waxaana intaa u dheer in la siiyay awooda buuxda uu ku sameyn karo wax kasta uu doono.